स्मार्टफोन कति समयमा फेर्ने? :: Setopati
स्मार्टफोन कति समयमा फेर्ने?
सेतोपाटी संवाददाता काठमाडौं,असोज २
स्मार्टफोन आजभोलि प्रायजसोको हातमा हुन्छ। सहरमा मात्र होइन। गाउँगाउँसम्म स्मार्टफोन विस्तार भएको छ। तर स्मार्टफोन बोक्नेहरु यति धेरै स्मार्ट पनि हुन्छन् कि नयाँ मोडल आउने वित्तिकै पुरानोको ठाउँमा नयाँ लिन्छन्।
एउटाले नयाँ लिएपछि अरुले पनि त्यसकै लहडमा नयाँ लिन खोज्छन्। तर स्मार्टफोन किन्ने भनेको फेसनमात्र होइन यो आर्थिक पाटो हो। यसका लागि यदि तपाइ पनि फेरिरहने सोचमा हुनुहुन्छ भने अहिलेको फोन साँच्चिकै काम नलाग्ने भएको हो? एकपटक चेक गर्नुहोस।
नयाँ मोडलका स्मार्टफोन आए पनि यदि तपाइसँग भएको फोनले नयाँ जस्तै काम गरिरहेको हुनसक्छ। नाम र मोडलकै पछाडी दौडिनुभन्दा पहिले आफ्नो अहिलेकै स्मार्टफोन हेर्नुहोस।
जतिसुकै नयाँ मोडल आएपनि त्यसमा हुने भनेको नयाँ सफ्टवेयर हो। केही क्यामेराको नयाँ गुणस्तर त हुन्छ तर धेरै परिवर्तन भएको हुँदैन।
यदि तपाईको अहिलेको फोनमा नयाँ सफ्टवेयर अपडेट भइरहेको छ भने नयाँमा हुने पनि त्यही एउटा हो। त्यसका लागि तपाइले आफ्नो फोनको अपडेट हेर्नुहोस। त्यसमा हुने सेक्युरिटी अपडेटहरु चेक गर्नुहोस। यदि सबै लेटेस्ट अपडेट छन् भने नयाँ फोन लिइहाल्नुपर्ने कुनै कारण छैन।
अर्को हो ब्याट्री। ब्याट्री कत्तिको टिक्छ। यदि तपाइसँग अहिले भएको फोनमा भएको ब्याट्रीले तपाइको दैनिक फोन प्रयोगमा काम गरिरहेको छ भने नयाँ लिनैपर्ने हुँदैन। अझ यसमा केही टिप्सहरु लागू गर्ने हो भने ब्याट्री टिकाउने बचाउन सकिन्छ। प्रयोगमा नहुने तर धेरै ब्याट्री खपत गर्ने एप्सहरु हटाउने, समयमै चार्ज गर्ने जस्ता सामन्य टिप्स अपनाउँदा ब्याट्री लाइफ केही बढाउन सकिन्छ।
त्यस्तै अर्को समस्या हो स्टोरेज। अहिलेका स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताले भोग्ने एउटा समस्या स्टोरेजको हो। यसका लागि केही सामन्य टुल्स छन्। जसले तपाइको यो समस्या समाधान गर्नसक्छन्।
यसका लागि मेमोरी धेरै खपत गर्ने भनेका फोटो र भिडिओ हुन्। जुन जतिसुकै मेमोरी भएपनि एकदिन अपुग त हुन्छ नै। यसका पनि समाधानका केही उपाया छन्। त्यो हो क्लाउड स्टोरेज। यसमा तपाई पैसा तिर्नुभयो भने उच्च गुणस्तरका फोटोहरु अपलोड गर्नसक्नुहुन्छ। यदि तपाई गुगल फोटो चलाउनुहुन्छ भने निशुल्क असिमित निशुल्क अपलोड गर्नसक्नुहुन्छ। निशुल्कमा फोटोको रेजुलोसन भने केही कम हुन्छ।
त्यसैले तपाई पनि स्मार्टफोन परिवर्तन गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने एकपटक अहिले भएकै फोन चेक गर्नुहोस कुन कारणल तपाईलाई नयाँ फोन लिनैपर्ने अवस्था छ भनेर।
तपाइले आज अलिकति नयाँ फिचर्स भएको फोन लिनुभयो भने एकाध महिनापछि त्यो भन्दा फरक अर्को मोडल पनि बजारमा आउछ। क्यामेराको पिक्सेल, नयाँ मोडलका पछि दौडिए स्मार्टफोन परिवर्तन गर्नुभन्दा आवश्यकता हेर निर्णय लिनुपर्छ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असोज २, २०७७, ०१:१६:००
मानवसेवा आश्रममा वर्ल्डलिंकको न्यानो कपडा सहयाेग